Maitiro ekumonera bvudzi pfupi - Iyo yakanakisa uye matekiniki ekuti uwane | Bezzia
Iwe unoda kubheja pane shanduko yekutaridzika asi iwe usina bvudzi refu? Izvo hazvina basa, nekuti zvakare nemavhudzi mapfupi tinogona kuwana mamwe eanoshamisa mabvudzi. Imwe yadzo ndeye iyo ine mafungu anotibvumidza isu kuratidzira yakasikwa maitiro ane vhoriyamu. Unoziva here kukwenya bvudzi pfupi?
Kunyangwe pakutanga zvingaratidzika kunge zvakaoma, hazviite nematanho akakodzera uye kuraira. Kubva nhasi unogona kunakirwa nebvudzi rakamonana zvakanyanya, nemafungu asina kupisa, naro uye zvimwe zvakawanda. Shinga neimwe yemafashoni evhudzi mwaka uno! Nyora pasi iwo matipi zvakanaka kuti usarasikirwe nechero ruzivo nekuti isu takatanga.
1 Kukomberedza bvudzi pfupi
2 Kukomberedza bvudzi pfupi pasina kupisa
2.1 Mapepa etoilet
2.3 Bhuni rakamonyoroka
2.4 Diki dzakamonyoroka
3 Maitiro ekumonera bvudzi rakatwasuka
4 Maitiro ekuisa curlers pane pfupi bvudzi
5 Maitiro ekugadzira mafungu pane bvudzi pfupi nedare
Kunyangwe paine hunyanzvi hwakati wandei hwatinogona kushandisa kana tichipindura maitiro ekurukisa bvudzi pfupi, tiri kuzotanga nekutaura nezvedanho rekutevera kuzadzisa mhedzisiro kana zvasvika pakukomberedza bvudzi. Matanho api atinofanira kutevera?
Iwe unofanirwa kutanga wageza bvudzi rako senguva dzose. Chinhu chakakosha apa ndechekuti iwe unoshandisa zvigadzirwa zvekunyorovesa izvo zvinokupa iwe muviri mune vhoriyamu, kunyanya patinotaura nezve dzakatwasuka bvudzi.
Nhanho inotevera inoda kuiswa kwekudzivirira kwemafuta. Ichokwadi kuti dzimwe nguva masaisai haadi kupisa, asi tinozozviona gare gare. Kwechinguva, kana iwe uchizoshandisa akajairika matekiniki senge mafiyasi kana simbi, saka iwe unoda chengetedzo yakanaka kubva pakupisa. Mushure mekushandisa kwayo, unomirira kuti iome kwemaminetsi akati wandei uye ipapo unogona kutanga nzira yekusimudzira.
Kuve nebvudzi pfupi, isu tichafanirwa kusarudza tambo tudiki kuti tiite mafungu edu. Bvudzi shoma raunotora mune yega yeaya tambo, iyo yakavharwa uye inoratidzira wave yako kana curl ichave. Saka kana iwe uchida kupedzisa zvakasikwa, edza kuvaita kuti vawedzere kusimba. Kutora mashoma masendimita kana kunyangwe zvishoma zvishoma, tichava munzira chaiyo.
Sanganisai bvudzi zvakanaka uye mupatsanure muzvikamu zvakasiyana, kana zvichibvira. Iyo yakajairika ndeyekubvisa iyo yepamusoro dura, kuisunga iyo ponytail. Nenzira iyi, tinozvitsaurira kune madiki uye akadzika makiyi.
Kana zvasvika pakuiumba, kana uchida kuwanda kwevhudzi rako, wobva waedza kuchinjisa hutungamiri hwekupendekera mubvudzi rako: Tambo inogona kutenderedzwa kurudyi uye kune kwayo divi, inotevera ichaenda kuruboshwe. Iwe uchaona shanduko!
Paunenge uchitove nebvudzi rako rese, unogona kuumba masaisai nezvigunwe zvako zveminwe uye kupedzisa nekuisa imwe hairspray. Izvi zvichaita kuti bvudzi rako rigare kwenguva yakareba kupfuura zvawaifunga.
Kukomberedza bvudzi pfupi pasina kupisa
Zvirokwazvo wakazvibvunza iwe kakawanda maitiro ekumonera bvudzi zvakasikwa kuti urege kuikuvadza nekupisa kwesimbi, kukomberedza simbi kana kuomesa. Zvakanaka, iwe unofanirwa kuziva kuti kune nzira dzakawanda dzatinogona kushandisa uye kuti iwe uchazoshamisika.
Iyi ndiyo imwe yedzakareruka uye dzakachipa nzira dzekumonera bvudzi rako. Unofanirwa kucheka tambo yetepa rekuchimbuzi woipeta pakureba, kuti uwane tambo refu, yakatetepa. Zvino isu tinongofanira kudaro govera mumvere, tora tambo wozvimonyanisa, imwe neimwe, muchikamu chepepa. Ipapo, isu tichagadzira ruzi pamwe nezvakasara zvedambwe uye ivo vanozogadzikana zvakanaka kunzvimbo yemidzi. Zviite nebvudzi rakanyorova.
Kunyangwe iwe uchikwanisa kuzviita nemasokisi akaomarara kana nechero jira rinopa iro roga, isu takasara netambo yekumusoro yekuva inoshanda. Isu tinosanganisa bvudzi zvakanaka uye takaisa bhanhire repamusoro pahuma. Ipapo, isu tinotora tambo dzisina kunyanya kukora uye isu tinofanirwa kumonyanisa pairi, mukati uye kanoverengeka nekuti zvinoenderana nehurefu hwebvudzi rako. Inofanira kunge yakaunganidzwa yakatenderedza bhanhire. Mirira mashoma maawa maviri kana matatu wozobvisa.
Kugadzira mafungu echisikigo nevhoriyamu, hapana chakafanana nekubheja pane iyi pfungwa. Izvo ndezvekusanganisa bvudzi mushe uye nekuzviunganidza mune ponytail yatinozozvimonyanisa pachezvayo. Neichi chakamonyoroka, isu tichagadzira mhando yeuta uye kuisunga nemicheka yebvudzi. Ita shuwa kuti yakanyatsogadziriswa. Kana iwe uchikwanisa kurara nayo, ichagara iri nani, kana isingamirire anenge maawa matatu usati waiburitsa uye uchiona iyo wavy mhedzisiro pane rako bvudzi.
Pfungwa iyi inotanga kubva pane yapfuura, kunyanya yakakwana kune avo vane bvudzi rakapfupika. Kunyangwe chiri chokwadi kuti mune ino kesi isu tichawana imwe yakatarwa mhedzisiro. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kugovera akati wandei uye kwete kutora bvudzi rese sezvatakamboita poniya. Mune yega yega yekugovera isu tichaita uta hwakakombama pachahwo. Pekupedzisira tinoibata nemicheka yemvere kana zvigunwe, tinomirira nguva ingangoita maawa matatu uye isu tichafadzwa nemamwe mac curls.
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, machira Izvowo imwe sosi yekumonera bvudzi. Kana iwe wakazvikwanira, unogona kuruka bvudzi rakanyorovera zvishoma uye kurara mumabhande akadaro. Nekudaro, mangwanani paunovasunungura, iwe uchaona kuti bvudzi rako rakamira sei nemafungu azvino chaiwo. Edza kugadzira mabraids ehukuru hwakasiyana.
Maitiro ekumonera bvudzi rakatwasuka
Dzimwe nguva wakambozvibvunza kuti ungapeta sei bvudzi pfupi rakatwasuka. Nekuti kana yakatwasuka, zvinowanzoita kuti zvisarambe zviri zvinyowani. Naizvozvo, pakutanga chinhu chakanakisa kupa vhoriyamu shoma kune chikamu chemidzi. Hazvisi nyore nguva dzose kusuka bvudzi rako musi iwoyo waunoda mafungu. Naizvozvo, edza zvishoma kuveza netambo uye iwe unozozvibatsira pachezvako nekamverera kebvudzi.
Paunenge uchinge uine vhoriyamu yakatarwa, ipapo unogona kubheja pane mac curlers. Hongu, irwo rudzi rwemachubhu ayo ambuya vedu vaimboshandisa uye ayo achiripo kwazvo muhupenyu hwedu. Iwe unongofanirwa kumonyanisa tambo mavari uye mirira imwe nguva. Kana iwe uchida zvese nekukurumidza, bheja pane simbi. Nayo iwe unotora tambo dzauri kuenda kuti ukombere uye ubudise zvishoma nezvishoma. Iwe unowana mafungu akakwana, kunyangwe kana iwe uchida zvimwe curl, saka bheja pane izvo zvinonamira. Kana aya aine humburumbira hwakadzikira, saka iwe unowana iwo akasarudzika mac curls. Rangarira kuti sedanho rekupedzisira, iwe unofanirwa kuisa yakawanda hairspray kumisikidza bvudzi.
Maitiro ekuisa curlers pane pfupi bvudzi
Chokwadi kare unoziva kuti makurudzi rudzi rwemasirinda kana machubhu anoshanda kumisikidza bvudzi mavari uye tora ma curls atiri kutsvaga. Kune hukuru hwakawanda pamwe nezvinhu izvo zvatinogona kuwana. Asi mune ino kesi, isu tinokuraira iwe kuti kuwedzera kune izvo zvinhu, ivo vashoma, sezvo vhudzi rako rakapfupika.
Kutanga kubva pairi, zvakanakisa kugeza bvudzi nekuomesa senguva dzose, asi kuisa furo shoma kugadzirisa akatevera mac curls uye nekuwedzera vhoriyamu kusvika kubvudzi. Ino ndiyo nguva yekuita uye chikamu. Iwe unongofanirwa kukwenya bvudzi mune yega curler uye woibata pakukwirira kwaunoda iko kwakakora. Sezvo iwe uchigona kusimudzira chete kubva pakati kusvika kumagumo kana, kusvika kumidzi. Kana iwe ukasarudza akakiya akakiya, zvakanyanya kunyorwa curl yako ichave. Sezvo isu tichaita rese basa nemanyoro nyoro, isu tinofanirwa kumirira kuti riome zvachose. Ino ndiyo nguva yekubvisa ma curlers asi pasina kudhonza, zvikasadaro, tinogona kugadzirisa ripple pamberi penguva. Tanga kuvabvisa kubva pasi kusvika kumusoro. Gadzira bvudzi neminwe yako uye imwe bvudzi kuti upedze.
Maitiro ekugadzira mafungu pane bvudzi pfupi nedare
Zvirokwazvo kazhinji iwe wakazvibvunza iwe pachako maitiro ekugadzira masaisai pane bvudzi pfupi pasina iron uye isu takatokuudza kare. Asi ikozvino zvinopesana zviri kuuya. Isu takachengeta iyo yekupedzisira nekuti tinoziva kuti ndeimwe yematanho akakosha asi kuti dzimwe nguva inotidzipa zvishoma. Nekudaro, kana iwe uchida kunakidzwa nemafungu akanakisa, nyora pasi zvese zvinotevera uye uchaiwana.
Isu tinosanganisa bvudzi mushe, shandisa anodziya ekudzivirira uye isu tinomirira kuti iome zvachose.
Isu tinogadzira kugovera pane iro bvudzi, kunyangwe zviri nani kutanga kuzasi nekumashure uye wozokwira zvishoma zvishoma.
Zvino iwe tora tambo nesimbi, ita chivharo chewrist kuchengeta puranga rakamira uye ichirega tambo yayo ichitarisa kumusoro.
Pasina kumira, ikozvino unotsvedza pasi wosunungura. Ukangoiburitsa, iwe uchaona mafungu anotanga kuoneka. Iwe unogona kugara uchivapa mamwe maitiro nezvigunwe.
Kana iyo tambo yakanyatsonaka, masaisai anenge achinyanya kutaurwa. Asi kana iwe uchida kupedzisa zvakasikwa, ipapo uchafanirwa kutora bvudzi rakawanda mune yega yega tambo. Zvino iwe unoziva kukwenya bvudzi pfupi! Uchaenda kupi kutanga?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Hairstyles » Kukomberedza bvudzi pfupi